Qalabka qaboojiyaha dhaadheer ee dhaadheer - Fikirka farshaxanka ee Tattoos
1. Diamond Tattoo laabta waxay keeneysaa muuqaal la jecel yahay
Dumarka waxay jecel yihiin jilitaanka Tattoo ee laabta sare; Tani waxay ka dhigeysaa inay u muuqdaan jinsi iyo muuqaal
2. Diamond Tattoo dhinaca gacanta wuxuu keenaa muuqaal qurxoon
Haweenka Brown waxay jecel yihiin Tattoo Diamond oo leh naqshad madow ee gacanta hoose; Tani waxay ka dhigeysaa inay u muuqdaan kuwo xiiso leh
3. Diamond tattoo xagga dambe ee gidaarka samee gabar jilicsan oo jilicsan
Gabdhuhu waxay jecelyihiin sawir dheeman ah oo gadaashooda ah. Tani waxay ka dhigeysaa kuwo soo jiidasho leh oo qarsoodi ah
4. Naqshadda mugdiga ah ee tattoo dheemanka qoorta gadaasheeda, waxay sameeyaan gabdhaha muuqaal qurxoon
Maydhayaasha leh maqaarka miro jilicsan ayaa u tegi doona tattoo mugdiga ah ee qoorta dhabarka, si ay u yeeshaan muuqaal qurux badan.
5. Qalabka casaan, khudrad dherjis ah Tattoo qoorta samee gabdhaha soo jiidata
Gabdhaha leh buluug buluug ah iyo jidh dhalaalaya waxay u tegi doonaan tattoo dheeman oo leh naqshad jilicsan oo ku taal dhinaca qoorta si ay uga dhigaan kuwo soo jiidasho leh dadweynaha
6. Waxay samaysaa dheeman rabbaani ah tattoo on cagta si uu u dhiso
Gabdhaha waxay sameeyaan dheeman tattoo on lugaha si ay u muujiyaan lugahooda oo ay ka dhigaan dhibic soo jiidasho leh
7. Tattoo dhejinta laabta sare waxay ka dhigeysaa gabadh midab leh
Gabdhaha Brown waxay jecel yihiin jilitaanka jilicsan ee xabadka sare oo leh xargaha khafiifka ah ee casaan iyo casaan; naqshadeynta tattoo waxay u dhigtaa si fiican oo qurxoon
8. Diamond Tattoo gadaashiisa dambe wuxuu keenaa muuqaalka dumarka
Gabdhaha waxay jecel yihiin dharka quruxda badan ee Tattoo gadaasha dhegta. Naqshadeynta tattoo waa mid soo jiidasho leh.
9. Diamond Tattoo laabta wuxuu keenaa muuqaal feminist ah
Gabdhaha sida quruxda qurxinta quruxda badan Tattoo dhinaca bidix ee xabadka. Naqshadeynta tattoo waa mid soo jiidasho leh.
10. Dharka Tattoo ee dhabarka waxay keenaysaa muuqaalka dumarka iyo galmada
Gabdhaha dharka lagu rido jaceylka jilicsan Tattoo leh naqshadda buluugga ah ee naqshadooda buluuga ah waxay u egtahay inay u muuqdaan kuwo jinsi ah oo muuqaal ah
11. Diamond Tattoo xagga danbe waxay u keeneysaa muuqaalka shucaaca ee gabdhaha
Gabdhaha Brown ayaa jecel dheeman Tattoo on their back; Naqshadeynta tattoo waxay u muuqataa inay u muuqdaan kuwo xiiso leh
12. Dharka Tattoo ee dhabarka hoose wuxuu keenaa aragti xarrago leh
Dumarka waxay jecel yihiin dheeman Tattoo leh naqshad buluug ah oo ku yaala dhabarka hoose; naqshadeynta tattoo waxay u egtahay inay u muuqato mid muuqda oo qumman
naqshadeynta mehndisawirrada raggashimbir shimbirtattoos cagtatattoo dheemantattoos qorraxdatattoos taajkiigadaal u laabotattoos saaxiib saxa ahJoomatari Tattoosarrow Tattootattoos sleeveDhaqdhaqaaqatattoo tilmaantattoo maroodigawaxaa la dhajiyay tattoostattoo biyo ahtattoos moonkoi kalluunkashaatiinka shiidantattoostattoos eaglecalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos iskutallaabtajimicsiga bisadahatattoos qosol lehTattoos Wadnahatattoo ah octopusfikradaha tattoosawirada gabdhahagaraacista gacmahatattoos qoortatattoos ubaxTattoo Feathertattoos qabaa'ilkalammaanahalibto libaaxtattoos gacantataraagada kubbaddahenna tattooTattoo infinityku dhaji tattooswaxay jecel yihiin tattoostattoo indhahaTilmaamta jaalaha ahsawirada malaa'igtasawir gacmeedlaabto laabtaTartoo ubax badanmuusikada muusikada